Posted by Gishe Abdi Wako on November 25, 2015
OMN:Oduu Sadaasa 24,2015 Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginicitti mormii barattotaa tibba kana jalqabeen wal qabatee, haga ammaatti namoonni 80 gahan hidhamuu isaanii himame.
Humnootiin tikaa barattootaa fi jiraattota magaalattii ammas adamsanii hidhaa kan jiran yoo ta’u, manni barumsaallee akkuma cufametti jiraachuu jiraattonni dubbatan.
Godina Shawaa Lixa aanaa Dandii Magaalaa Giinciitti, barattoonni mana barumsa Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Gincii, torbaan darbe keessa, Master Pilaanii Finfinnee irratti, gaaffii mirgaa karaa nagaan dhiyeeffachuun hiriira mormii waan gaggeessan qofaaf qabamanii hidhamaa jiraachuun himame.
Jiraataan magaalattii tokko akka jedhanitti, wayta ammaa kana namoonni 80 gahan, qabamanii waajjira buufata poolisii magaalaa Gincitti kan hidhaman yoo ta’u, namoonni birootis hidhamuudhaaf barbaadamaa jiru.
Namoota mormii nagaa dhageessisan, jeequmsaa uumuuf gurmooftan jechuun, humnootiin tikaa sababa hin jirre uumanii ummata hidhuu fi reebicha irratti raawwataa akka jiran namni kun dubbatan.
Humnoota tikaa mootummaatiin, ammas namoonni hedduun guyyaa irraa guyyatti adamsamanii qabamaa jiru kan jedhan namni kun, magaalaa Gincii keessatti halli ammaan kana muldhataa jiru gar malee yaaddeessaadha.
Namoota hidhaman kana keessaa irra caalaan isaanii barattoota yoo ta’u, barasiisotaa, daldaltootaa fi jiraattonni magaalaa Ginciitis hidhamiinsa kanaaf saaxilamuu isaanii namni kun ni dubbatu.
Akka namni kun jedhanitti, barattoonni fi jiraattonni qabamanii akka hidhamanii fi, dararman kan taasisan, kaabinee fi, itti gaafatamtoota waajjira dhaabaa aanaa Dandii waliin ta’uudhaan, humnoota tikaa meeshaa waraanaa hidhatan fiduudhaan magaalaa keessa bobbaasanii ummata nagaa reebsisaa jiru.
Itti dabaluun watya ammaa kanas namoota hedduu hidhuudhaaf qondaalonni mootummaa magaalaa Gincii keessatti sakkatta’iinsa addaa geggeessaa akka jiranis himanii, bakka tokko tokkottis jiraattonni aanichaa mormii isaanii dhageesisaa akka jiranis ibsanii jiru.
Mootummaan biyya bulchaa jiru, gaaffii seera qabeessa barattoonni dhiheeffatanii turan, deebii kennuu dhiisee barattoota adamsee hidhaa jira kan jedhan namni kun, sababa kanaaf barattoonni barumsa isaanii dhiisuudhaaf dirqamaniiru.
Barattoonni hedduun magaalaa dhiisanii gara birootti kan dheessan yoo ta’u, manniin barumsaallee haga ammaatti akkuma cufametti jiraachuullee namni kun nutti himanii jiru.
Usmaan Ukkumeetu gabaaseera.
← Finfinnetti bara 2007 – 2014 jiddutti fedhiin lafaa %51’n yoo ol ka’u, baay’inni ummataa garuu %17 qofaan dabale.
Tarkaanfii WBO | Onkoloolessa 2015 (via SBO) →